Fast Kuchaja Power Bank
Zvipo Wireless Charger
Tsika PVC USB Flash Drive
PS5 Controller Kuchaja Chiteshi
JoyCon yeNintendo Chinja
Tinogona Kutora Power Bank Pandege?
Vanhu vazhinji havazivi kuti vanotenderwa kuunza mabhanga emagetsi anotakurika mundege here kana kuti kwete. Indasitiri yendege inozivikanwa nekuomesera zvinhu zvinotenderwa mubhodhi, uye zvinosuruvarisa kuti mabhatiri mune zvese uye mabhangi emagetsi, kunyanya, haasunungurwe kubva pakudzorwa. Ini...
Sei Usingashande Pamwe Chete neM-Queen Electronics?
na admin pa 21-01-28
Patinonyora zita iri, webhusaiti itsva yeM-Queen yakatangwa zviri pamutemo. Tichitarisa kumashure pamakore gumi apfuura, kambani yedu yakafamba zvishoma nezvishoma kubva kudiki kugadzira workshop kuenda kubhizinesi remazuva ano, timu yedu yakakura kubva pagumi nevaviri kusvika kune zana kana zvakadaro ikozvino, uye zvigadzirwa zvedu zvawedzera...
Iwe Unoziva Inonakidza Sayenzi Yekukurumidza Kuchaja Power Bank?
Smartphone kutsungirira kudiwa kwevanhu vemazuva ano kwekushandisa mbozhanhare hakuna kufananidzwa, nekuti hupenyu hwebhatiri hwefoni haugone kuzadzisa zvinodiwa, saka unofanirwa kuwana kuburikidza nefoni yekuchaja nekukurumidza uye kukurumidza kuchaja simba rebhangi. Kuchaja nekukurumidza zvakare chinhu chakakurumbira ...
Maitiro eKutenga Power Bank, Usanyengerwa NeMutengesi Zvakare!
Mazuvano, iwe wakambonzwa nezve simba bhangi zvishoma, vamwe vevakomana vanogona kunge vakatoshandisa rimwe kana maviri anotakurika magetsi mabhangi. Wese munhu anogona kunge aine pfungwa yekuti kana simba rakawanda chitoro chebhangi remagetsi, nguva zhinji yarinogona kuchaja mudziyo. Zvirokwazvo, ndizvozvo. Asi yako 4000mah nharembozha ...